निपाह भाइरस के हो ? | खुल्लापाना
खुल्ला पाना २०७८ भाद्र ३०, बुधबार (८ महिना अघि) ३२ पटक पढिएको
निपाह भाइरस पशुबाट मानिसमा सर्ने भाइरसजन्य रोग हो । यो गम्भीर प्रकृतिको संक्रामक रोग हो । प्राकृतिक रूपमा फ्रूट ब्याट भन्ने प्रजातिको चमेरोमा यो भाइरस पाइन्छ ।
निपाह भाइरसको संक्रमण पहिलो पटक सन् १९९९ मा सिंगापुर र मलेसियामा पहिचान भएको थियो । त्यसपछि २१ मे २०१८ मा दक्षिण भारतीय राज्य केरलामा देखिएको थियो ।
त्यही फ्रुट ब्याट भाइरस पशुपन्छी तथा फलफूलको माध्यमबाट निपाह भाइरस सर्ने जोखिम हुने सरुवारोग विशेषज्ञहरुको भनाइ छ ।
निपाह भाइरस कसरी सर्छ ?
चमेरो, बंगुरबाट निपाह भाइरस मान्छेमा सर्छ । सरुवा रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार चमेराले खाएका फलफूलमा -याल मिसिन्छ र त्यस्ता फलफूल मानिसले खाएपछि सर्ने जोखिम हुन्छ ।
फ्रुट ब्याट जातको चमेरोले खाएको जुठो फलफूलबाट सर्छ । प भाइरस जनावरबाट जनावरमा, जनावरबाट मानिसमा र मानिसबाट मानिसमा पनि सर्छ । यस्तै संक्रमित व्यक्तिको रगत, दिसा, पिसाबसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएमा पनि सर्छ ।
निपाह भाइरस संक्रमण भए कस्तो लक्षण देखिन्छ ?
निपाह भाइरसको रोकथाम कसरी गर्ने ?
बंगुर तथा सुँगुरको नजिक जाँदा सचेत हुने |
चमेराले जुठो हालेका फलफूल नखाने ।
फलफूल राम्रोसँग पखालेर मात्रै खाने ।
गाईवस्तुको गोठ र फार्म सफा राख्ने ।
मासु काट्दा र पकाउँदा पञ्जा र मास्कको प्रयोग गर्ने ।
सकेसम्म पानी उमालेर मात्रै पिउने ।
बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुने र भीडभाडमा जाँदा मास्क लगाउने । एजेन्सीबाट